International Travel Awards, Spa Awards, Kudya Mipiro 2021 Kusarudzwa kwakavhurwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » International Travel Awards, Spa Awards, Kudya Mipiro 2021 Kusarudzwa kwakavhurwa
Awards • nhau • Trending Now
Yepasi Pose Kufamba Makomborero
kushanya https://internationaltravelawards.org/ kunyoresa kana kupinda muhotera yako, bhodhi rekushanyirwa, zvinokwezva, mapaki emusoro uye makambani ekufambisa eInternational Travel Awards 2021
I International Travel Awards ndeimwe yemubairo wakakurumbira weindasitiri yekushanya uye yekugamuchira vaenzi pasi rose. Mubairo uyu unorongwa gore rega rega neKSA Kushambadzira Kushambadzira uye inovavarira kucherechedza vanoita zvakanaka mumakambani ekushanya nekugamuchira vaenzi pasi rese.
Vakasarudzwa vanokokwa kujoina chirongwa cheGore 2021 mubairo. Iwo makwikwi ezvikwata akagadzirwa zvine hungwaru kuti akwanise rimwe nerimwe bhizimusi rakamira muindasitiri yekushanya. Vakasarudzika vanokodzera vanobva kumaindasitiri indasitiri akadai seMahotera, Resorts, Villas, Service dzimba, Makambani ekufambisa akadai seDMCs, Vafambi vekushanya neMafambiro Ekufamba, Airlines, Tourism Boards, Zvinokwezva, theme Parks, Water Parks & zvimwe zvikamu muindasitiri yekushanya.
Iyo gore 2021 iri kukura uye iri nani. Ehe, KSA Yekushambadzira kushambadzira yakaronga kutora 3 mibairo padanho rimwe chete. International Dining Awards 2021 uye International Spa Awards 2021 vanobatana pamwe neInternational Travel awards 2021 kuita chiitiko chikuru chekushanya kwegore ra2021.
Chirongwa chemubairo ichi chinopa chikuva chakakura cheavo vakasarudzwa kukwidziridza maricho pasi rese kuburikidza nenzira dzakasiyana sePR, Media, Social Media, online nhau masosi & nezvimwe.
Kusarudzwa kweInternational Travel Awards 2021 iko zvino kwavhurwa kumatunhu ese matanhatu Asia, Europe, Middle East, Africa, America, uye Oceania. Mubairo wegore rino uchasanganisa mibairo mitatu: International Travel Awards, International Dining Awards, uye International Spa Awards. Vanopfuura zviuru zana nezviuru zvekufamba kwenyika uye nyanzvi kubva kuindasitiri yekushanya vanozovhota kusarudza vanokunda.
Yepasi Pose Dining Awards 2021 yakagadzirirwa kuti ipe nekupa mubairo vakapi vanopa rubatsiro muresitorendi & indasitiri yezvikafu kutenderera pasirese. Vakasarudzwa vanobva kumahotera ega, maresitoreti emunyika dzakawanda, maresitorendi ehotera uye chero makambani anopa masevhisi muresitorendi uye indasitiri yezvikafu pasirese. Kushanya http://internationaldiningawards.com/ kunyoresa nzvimbo yako yekudyira.
International Spa Awards 2021 yakagadzirirwa kuratidza vanoita zvakanaka muindasitiri ye Wellness uye Spa uye kuvapa mubairo wekusimudzira yavo spa brand pasi rose kune anotevera makuru marefu. Vakasarudzwa vanobva kune yega spa uye nzvimbo dzehutano, Hotera Spa, Spa Chain kutenderera pasirese. Kushanya https://internationalspaawards.com/ kunyoresa yako hotera spa kana nzvimbo yekutandarira spa yepasi rose spa mibairo 2021
Gore rega rega makambani e2,000 + ekushanyirwa uye ekugamuchira vaenzi kubva kuma110+ nyika dzinotora chikamu muAward kukwikwidza mumatanho anodarika zana nemakumi mashanu eMubairo. Vese vakasarudzwa vanowana mikana yakawanda yekusimudzira yavo yekushanya brand kune inotevera nhanho.
Chikwata chakazvipira cheJury chinouya kubva kwakasiyana siyana masisitimu ekushanya neumwe neumwe achiunza hunyanzvi hwavo, kushingairira, uye ruzivo rwekusarudza, nekuratidzira vatori vechikamu padanho repasi rose.
Iyo Jury timu inoongorora yega kusarudzwa, inonzwisisa yavo USP uye inova nechokwadi chekuti iyo chaiyo kambani inosarudzwa semunhu anokunda gore rega.
Chikwata chevatongi chemibairo chinosanganisira 35% yechikwata kubva kuHospitality, 18% kubva kuTourism Board, 14% kubva kuMedia nePR, 11% kubva kuHurumende Associations, 10% kubva kuCorporates zvine chekuita neindasitiri yekufambisa neyekushanya, 9% kubva kuVashanyi Vanoshanya, uye 3% kubva kumakambani anotungamira Ekufamba kutenderera pasirese.
Masangano akasarudzwa anowana kukwidziridzwa pasocial media mapuratifomu eInternational Travel Awards.
Masangano achawana mukana wekutumira PR nezvesangano ravo muNews chikamu cheInternational Travel Awards uye vawane mukana wekugadzira mucherechedzo wakasimba pakati pevanopfuura zviuru makumi mashanu zvevashambadzi vezvifambiso kutenderera pasirese.
Kusarudzwa kwese kunozopihwa maneja wekiyi kiyi kuvabatsira kusvika padenderedzwa rinokunda.
Iyo kambani ichawana zvakare mukana wekuratidzira muchikamu chekusarudza cheiyo yepamutemo Awards Webhusaiti.
Munguva yechiitiko che gala, Vanokunda vanokodzera kupihwa muhomwe yekukunda yakadai seinokunda bheji, chitupa chekukunda, vhidhiyo yekuzivisa yakatsaurirwa uye zvimwe zvakawanda. Vakahwina mibairo vanogashira kuzivikanwa kukuru, kushambadzira, uye mikana yekushambadzira pasirese.
Vashoma vevakasarudzwa kubva ku2020 Tuzo ndeve Banyan Tree, Shanyira Maldives (Tourism Board), The Kempinski, Hilton, Four Seasons, Fairmont, Shangri La, Atlantis muchindwe, Vivanta, The Chedi, Yas Water World, Viceroy Bali, Sentosa , Warner Bros Abu Dhabi, Hanging Gardens yeBali, Swissotel, Marriott, Radisson Blu, COMO Maldives, Rima Sky Portugal, Bayat Hotels, Le Grand Bellevue, Four Points naSheraton, Crowne Plaza, Double muti naHilton, Iyo Westin Ubud, Saka Sofitel.
Kushandira Shangri-La Boka rakashanda zvakanaka kwe2 nyowani ...